Yini ehehwa yiMars eCapricorn? - I-Venus
Yini ehehwa yiMars eCapricorn?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - IVenus eSagittarius, iMars eCapricorn
IMARS KUKHANGELEKA KWASEKAPRIKA:
Abantu abane-Mars eCapricorn bakhangwa ngokocansi kulabo abaneI-VenuseCapricorn, Taurus, Virgo neCancer.
Ubuwazi ukuthi izici zakho eziningi zomzimba zincike kusibonakaliso sakho se-zodiac? Yebo, izinkanyezi zinganquma ukubukeka kwakho nezici zakho, ziphinde zibikezele ukuthi yini ekwenza unganqandeki kwabanye. Sanibonani ababukeli futhi samukelekile ku-Beast! Kubalulekile ukuthi izici zomzimba wakho zikwenze uzizwe uphephile. Ezweni lapho wonke umuntu engaqiniseki ukuthi ubukeka kanjani, kuyasiza ukwazi ukuthi yiziphi izici zakho zomzimba ezikhanga kakhulu.
Lapho uvuma ukuthi yini ekwenza ube okhethekile, nakanjani uzofunda ukuzithanda. Isimpawu ngasinye se-zodiac sinesici esithile somzimba esichaza ukuthi bangobani futhi sibahlukanise nabanye. Esihlokweni sanamuhla, sizokhuluma ngezici zakho zomzimba ezikhanga kakhulu ngokususelwa kusibonakaliso sakho se-zodiac.
Kusuka eTaurus enesikhumba esihle kunazo zonke, iLibra enamehlo akhangayo, uLeo onezinwele ezimangazayo, isilevu esingenakuqhathaniswa seScorpio, kuya ku-Aquarius enezindebe ezihamba phambili nokuningi, bheka kuze kube sekupheleni ukuze ufunde kabanzi ngazo. Ama-Aries: ICosmic Isilwane sama-Aries yinqama, futhi lokhu kumelwe wuphawu lwezimpondo ezimbili. Inqama yomuntu Zingase zingabi nazo izimpondo zangempela, kepha amabrawuza azo aqinile alingisa lesi simo esibi.
Waziwa njengomuntu onomlilo omkhulu. Unamashiya aminyene amahle azobamba abalandeli bakho futhi lokho kuyisici sakho somzimba esikhanga kakhulu. Noma kungowesilisa noma owesifazane, iziphequluli zabo zizobe zi-arched kangangoba sonke sizolangazelela.
Lezi ziphequluli ezimbili zimelela nemikhawulo emibili ephikisanayo yobuntu bakho, isici esibi kakhulu nobumsulwa? Singathanda ukwazi kumazwana angezansi! I-Taurus: I-Taurus ekhululekile futhi engenankinga ayizibandakanyi nengcindezi eyaziwa ukuthi ibangela ukuqhuma kudle abakufunayo, balale ngangokunokwenzeka, futhi banake ibhizinisi labo, okuholela esikhunjeni esijabulayo. Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi abanaki. Imvamisa ziyaqaphela kakhulu futhi zihlala zinakekela kahle isikhumba sazo.
Uyakhanya ngaphakathi futhi asebenze ngesimo sakhe sesikhumba esisebenza kahle futhi esisebenza kanzima. Isikhumba sakho ngakho-ke ngokungangabazeki siyimpahla yakhe enhle kakhulu. Isikhumba esihle sisiza neTaurus kwesinye isikhathi engavikelekile ukuthi izethembe. encoma ubuntu babo obudlamkileyo; banekhono lokuxhumana ngokusineka kwabo.
Uma bekumomotheka kanye, uzoshaywa unomphela. Ngenxa yokumamatheka kwabo kwangempela, bangenza ukholelwe kubo ngisho nangokwengeziwe. Futhi abasoze bakudumaza, njengoba beyohlale bekhona - bakhona ngawe lapho ubadinga.
Abamoyizeli nje ukujabulisa abanye. Basabalalisa injabulo nothando nomaphi lapho beya khona. Ungenza isimo esingakhululekile sibe ngesenjabulo ngokungenzi lutho ngaphandle kokumamatheka.
Ukumomotheka okubili kuphelele kangangokuba bangaba ngamanxusa omkhiqizo abakhiqizi bomuthi wokuxubha. Umdlavuza: Wake wabheka isisu somuntu futhi walengisa? Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi ubulokhu ubuka isisu sesiguli somdlavuza, okuyingxenye yomzimba ekhanga kakhulu, i-ether iqoshwe nge-rock-hard, izokubamba. Abesifazane abanomdlavuza bakhanya ngokwengeziwe ngesikhathi sokukhulelwa kwabo futhi bangabukeka bubahle kakhulu ngalesi sikhathi esihle Umuzwa wakho, osesiswini sakho, uvame ukuba namandla kakhulu; uhlala uzama ukuyigcina isesimweni esiphezulu ngokuvivinya umzimba njalo.
Leo: Leo ngesinye sezibonakaliso zezinkanyezi ezikhanga kakhulu. Njengama-master showman, nabo banekhono elikhulu. NjengoLeo, bazalelwa ukuba babonakale.
Bahlala futhi baphefumula kahle, ngokungangabazeki. Zine-feline mane ekhuluphele futhi ecwebezelayo, efana neyengonyama. Lelo khanda elihle elinezinwele eziwugqinsi liyisici sabo esihle kakhulu futhi kuyaqondakala ukuthi bayathanda ukubukisa ngalo.
Amalokhi awo acwebezelayo angabonakala kude. Eqinisweni, bahamba ibanga elengeziwe ukunakekela izinwele zabo, ukuheha wonke umuntu. Njalo uma bengena egumbini bavamise ukukhombisa inhlonipho futhi izinwele zabo zidonsa konke ukunakwa iVirgo: Virgo, imelelwa njengophawu lweVirgo zodiac.
Futhi uthandeka kakhulu amathanga akhe nezinqe zakhe. Futhi asikhulumi nje ngabesifazane. Kuyafana kubo bobabili ubulili.
Zombili izintombi nabesifazane zinamathanga nezinqe ezihehayo. Ngenkathi abanye beya ejimini noma bathole nokufakelwa ukuze bathole isitho esikhulu futhi esiphakeme, amaVirgos akudingeki enze lutho ngakho ngoba vele babusiswe ngomuhle. Noma yini abayigqokayo, bazolahlwa ngoba babukeka bemangalisa kukho konke abakugqokayo.
ILibra: amehlo aphakathi kwezinto eziphawuleka kakhulu ebusweni bomuntu, kanti iLibra inezimpawu ezinhle kakhulu kuzo zonke izimpawu zomgamu wezulu. Ngakho-ke qaphela lapho ubabheka emehlweni noma ungalahleka emehlweni abo. Ziyakhanya futhi zifudumele kangangoba uma uzibuka ungabona emphefumulweni wazo.
Futhi uma ubheka emehlweni abo uyabona ukuthi bangabantu abanakekelayo nabanothando abadlalayo futhi abajabule ngasikhathi sinye. ILibra ayikwazi ukufihla imizwa yabo ngoba lapho othile ebheka emehlweni abo, ingasho ukuthi udabukile, udumele, noma ujabulile. Amehlo abo embula izimfihlo zabo abengeke aziveze ngenye indlela.
Kungakhathaliseki ukuthi bagcoba izimonyo noma babukeka bemvelo, amehlo abo ayofana nezinkanyezi ezikhanyayo ebusweni babo. I-Scorpio: Abomdabu baseScorpio ngempela ngezinye zezimpawu eziheha kakhulu zezinkanyezi. Ukwethembeka kwabo okunenkani kunezela ekukhangeni kwabo.
Bamela abanye ngaphandle kokukhetha, kungakhathaleki ukuthi kwenzekani. Futhi isici sabo somzimba esikhanga kakhulu umhlathi wabo. Izici zobuso zalabo abazalwa ngaphansi kweScorpio zivame ukuqina futhi zibe nesimo se-angular.
Kodwa umhlathi wabo uyinto ekhethekile okungebona bonke ababusiswe ngayo. Ungazami nokuncintisana nofezela emdlalweni womhlathi, uzolahlekelwa. I-Sagittarius: NjengoSagittarius uphethe uphawu lwamaqhawe, labo abazalwa ngaphansi kwalesi sibonakaliso bavame ukuba nomzimba weqhawe.
Uyashesha futhi mude kunabanye abaningi. Abaningi bethu bafisa ukuba bakhulu. Futhi iSagittarius inethuba elingcono lokuba mude, Isazi sezinkanyezi Yini ehambisana kahle nokuphakama? Imilenze emihle.
Umlenze weSagittarius uzothuthukisa ukubukeka kwawo ngokuphelele. Uma ungowesifazane onalesi sibonakaliso se-zodiac ngeke ube nankinga yokukhombisa imilenze yakho lapho uya olwandle. ICapricorn: Maphakathi nobuso kukhona ikhala futhi kungenye yalezo zingxenye zomzimba okunzima kakhulu ukuza ngazo.
Amahawu eCapricorn, nokho, angabanye babambalwa abanekhala elifanele nje. Baningi osaziwayo asebeke bahlinzwa ukuze bashintshe ukuma kwamakhala abo. Kepha iCapricorn ngeke ibe nalenkinga njengoba izothokoza kakhulu ngalokho abanakho okulingana ubuso babo ngokuphelele.
Iphakathi, ingokoqobo, futhi ifanekisela ngokubukeka. Njengoba kuyisici esikhangayo, sithambekele ekusibekeni ezinye izici zaso. U-Aquarius: U-Aquarius unezindebe ezizokwenza ubange.
Kokubili abesilisa nabesifazane balesi sibonakaliso se-zodiac banezindebe ezinhle, ezinhle; abakhukhumale nabakhangayo, banezipho zikaNkulunkulu ezenzelwe ukwenza ubulungiswa ekubukekeni kwabo okuhle. Uma beqala ukukhuluma ngezindebe zabo ezibazwe kahle, ayikho indlela abantu abangeke babalalele ngayo. Abanye bazozama ukuthatha wonke amagama aphuma emlonyeni wakho ngoba abakwazi ukunquma ukuthi izindebe zakho noma indlela okhuluma ngayo iyakhanga futhi iyaheha yini.
Njengomuntu, kunezindlela eziningi zokuxhumana nemizwa yethu. Futhi ukuxhumana ngokomzimba kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokwenza uthando onayo ngomunye umuntu. Ama-Aquarians mhlawumbe angcono kakhulu ngoba anezindebe eziphelele.
Ukuqabulana nokwenza kahle kubalulekile kunoma yibuphi ubuhlobo obuhle. Kunezindlela eziningi ongakwenza ngazo ukuze kungadinisi. Ukuze wazi ukuthi ziyini, bheka le ndatshana enesihloko esithi '21 Types Of Kisses That Will Make Your Love Life Better. ' Manje buyela kwesakho Isici esikhanga kakhulu ngokuya ngesibonakaliso se-zodiac Pisces: Isici esihlaba umxhwele kakhulu salesi sibonakaliso yizinyawo zazo, ezimele isimo sazo sokuzimela.
Bathanda ukugijima futhi banenkululeko yokugijima, yokuhamba amamayela futhi bakhonze isintu ngezinyawo zabo ezinhle. Zihlobene nenqubekela phambili, okusho ukuthi izinyawo ziyabasiza ukuhamba nokuhlola izindlela ezintsha nemibono yokusiza isintu nomphakathi. Isikhathi sokucabanga ngokuthi ungalithuthukisa kanjani izwe kanye nabo ngokwabo.
Ngenxa yezinyawo zabo, ngeke babe nankinga yokugqoka izicathulo zezinzwane ezivulekile. Izimpawu ze-Zodiac azikutsheli kuphela izici zakho ezikhanga kakhulu, futhi zinamandla okuveza izici eziningi zempilo yakho nekusasa lakho. Uyazibuza ukuthi sisho ukuthini? Thola Izimpendulo Zakho Lapha: Funda Ngekhaya Lakho Lamaphupho Ngokususelwa Esibonakalisweni Sakho Sezinkanyezi Funda Ngemisebenzi Engcono Kakhulu Yakho Ngokuya Ngophawu Lwakho Lwezinkanyezi Lezi zihloko ezi-2 zizokusiza ukuthi uqonde ukuthi izinqumo ozenzayo empilweni zizokuthinta kanjani Ungakhohlwa thanda futhi ubhalisele isiteshi sethu.
Uyakholelwa kwizimpawu zezinkanyezi namandla azo? Sazise kumazwana angezansi!
Yini iVenus eSagittarius ehehwa?
IVenus eSagittarius ikhombisa ukuthi uyayithanda ifilosofi, ingokomoya, nolwazi oluphakeme lanoma yiluphi uhlobo. Ngalesi sizathu, ungahehekaumuntu onolwazi futhi ohlakaniphilenomuntu ongakweluleka ngendlela efanele futhi abonge okuhle kwakho.22. 2020.
Khumbula njalo: yiba yiVenus yakho - ube yiVenus yakho - ube ngumlilo wakho! (Umculo ojabulisayo) ^ - Ngikuthanda kakhulu ukufundwa kwezinkanyezi. ^ Mhlawumbe ngabheka ishadi lami lokuzalwa okokuqala ngqa ngonyaka odlule. ^ - Bengifunda ukufunda ngezinkanyezi kusukela ngineminyaka engu-16. ^ Nginobudlelwano obungejwayelekile nabo futhi ngiyisebenzisa kakhulu ukuxhumana nabangane bami nozakwethu futhi kwesinye isikhathi kumnandi uma unesifiso sokuthola ukuthi iVenus yakho ikuphi kuyinto.
Ingane? Uxhumana kanjani? ^ - UChristina uzame (ukuhleka) ukungiletha ekufundweni kwezinkanyezi. ^ Wenyusa ishadi lami lokuzalwa, ^ wazama ukungichazela, ^ kodwa angikaze ngilithole ngempela. - Ngingasho ukuthi, isitayela sami ngokuvamile sihlanzekile futhi sincane.
Ngigqoka izinto eziningi ezivela ezitolo ezidayisa ezitolo ezinkulu, ngakho-ke eziningi zazo zivuna - ngivame ukugqoka izingubo ezingenza ngizizwe sengathi ngingena egumbini nami. Ngiyazithanda izingcezu engizibheka njengezicucu zesitatimende sesiginesha - ngivame ukugqoka konke okumnyama, kepha ngiyathanda ukukubeka ngaphezulu komunye nomunye futhi ngithanda izingcezu ezizwakala zihlanya - Namuhla sizohlangana noRebecca Gordon ofundele ukufunda izinkanyezi ngaphezulu kweminyaka eyishumi futhi usitshela ngathi ngezindlela okungenzeka ukuthi besingakaze sizicabange ngaphambili. ^ - NginguRebecca. ^ Ngingumfundi wezinkanyezi okhokhelwayo, ^ futhi ungumbhali wephephabhuku nombhali.
Ngikhula ngokufunda izinkanyezi. Umama wami wokutholwa uyisazi sezinkanyezi, ngakho-ke bengifunda inkanyezi ngoba ngiyakwazi ukukhuluma. Ishadi lendalo liyisifinyezo sesibhakabhaka ngesikhathi esiqondile owazalwa ngaso.
Akekho omunye umuntu emhlabeni oneshadi lokuzalwa elilingana nelakho Uma ngenza itafula lesitayela, ngikhipha wonke amaplanethi bese ngibheka nje izinto ezintathu: Ngibheka iLanga, i-Ascendant, okuyisibonakaliso esikhulayo, neVenus. Yini ukudla kwakho okuyisisekelo? “Cishe unezimbili noma ezintathu zalezi, lokho wuphawu lwakho lwelanga. Uphawu lwakho olukhulayo lungitshela ukuthi isibonakaliso selanga siwenza kanjani umsebenzi waso kanti nesibonakaliso sakho seVenus singitshela ngokukhanga kwakho, ukukhanga kwakho.
Manje ngincoma wonke umuntu ukuba agqoke njengoba enjalo kumdwebo ngoba usikhombisa ukuthi ingaphakathi lethu liyakhonjiswa ngaphandle - Sawubona, Rebecca! - Sawubona! - Sanibonani nonke! Ngilungiselele ngamunye wezinkanyezi zakho zezinkanyezi namashadi wakho wesitayela somuntu siqu alungiselelwe. Nonke nigqoke kahle njengehoroscope yenu okwamanje. Lokhu kungokwakho, uChristina. - O, kuhle.
Futhi u-Emily. - Kanye neKuwilileni- Kuhle. - Ngakho-ke manje sihlangana nezitayela zezitayela ezizosigqokisa ngakho-ke ucabanga ukuthi kufanele ufune ini? ^ - nginguSam. ^ - Futhi nginguLunden- Futhi singama-stylist. ukugqoka kabusha.
Konke, ake siqale ngophawu lwakho lwelanga okuyiGemini. Lapho ngicabanga ngamawele ngicabanga ngemidwebo exubile, ubumnandi, ukudlala ngothando, izesekeli eziningi futhi njalo isitayela sezinwele esithakazelisayo. Ngingancoma ama-stylists ethu ukuthi abalethele amawele amaningi.
Ngifuna ukubona ukuphrinta okuxubile, kumnandi ngokwengeziwe. Ilanga leGemini, iScorpio siyaphuma, ngakho-ke siletha ikhwalithi yesithunzi lapha nentombazane embi futhi. - Hawu! Ngiyakuthanda lokho.
Tina omubi! - Ngiyabona iVenus yakho ingaphansi kophawu lweTaurus. Ikhwalithi iyikho konke uma kukhulunywa ngeTaurus. Ngingathanda ukukubona ukuhlanganisa konke ngokubukeka okukodwa.
Ungumuntu ongakwenza. - Futhi kuthiwani ngeKuwilileni? I-Gemini yesibonakaliso selanga ehlekisayo, enothando, imibhalo ehlanganisiwe. Ukhuphuka uSagittarius Lokhu ukubukeka kwe-globetrotter: i-eclectic, engajwayelekile, ubucwebe obuvela emhlabeni wonke.
Ngakho-ke isibonakaliso sakho seVenus siyi-Aries: ama-Aries anesibindi, anamandla futhi anomlilo. Ngingasho ukuthi inselelo yami bekungeyakho nawe ukuqinisa uphawu lwakho lweVenus: imigqa ecacile nejometri egqamile. - Kuthiwani ngo-Em? - Omnyama, omnyama, futhi omnyama kakhulu.
Lapha sikhuluma ngesiqephu sesitatimende esimnyama nesinamandla. Iqembu elilandelayo ukhuphuka iTaurus. Lokhu akuyona nje noma yiziphi izingubo ezimnyama.
Lona umklamo ophezulu, umklami ophezulu ophezulu omnyama. IVenus yakho ikuSagittarius. I-Sagittarius ingithatha ekuhambeni emhlabeni wonke, izindawo ezikhanyayo zombala.
Ngingathanda ukubona ithonya elihle ngokwengeziwe ngento ye-Torian ukwengeza ama-pops ambalwa ombala - O Nkulunkulu! - Ezothando zifile ku-Emily. (wonke umuntu uyahleka) - Kuyiqiniso. Ezothando zingifele impela kodwa ngijabule ukuzama lezi zeluleko - ngiyathembisa ukuthi uzozijabulisa kakhulu ngakho - Ngokuqondene nesitayela sikaLunden noSam, ^ bekujabulisa kakhulu ukubona ukuthi bakhethelwe ini mina ... ngoba le ngubo yinto ebengingasoze ngayigqoka - Ngakho-ke ukubukeka kokugcina ukuthi uLunden noSam bahlangane kwaba kuhle kakhulu.
Nginomuzwa wokuthi kungaba yimi ukube benginemali ethe xaxa bese ngimamatheka kakhulu. ^ Kwakumnandi nje impela futhi kudlalwa ngothando. Ukuphawula kwami ​​okungahambi kahle kulokhu kungaba ukuthi kube sengathi bekukhona.
Kwakumatasa. Njengokungathi ngiphethe izikhwama ezimbili nendandatho emunweni ngamunye. - Bengingaziboni ngigqoke leyo blazer ebomvu.
Izingxenye ebengizijabulela ziphazamise ukwakheka kwalokho ebengikugqokile. ^ Angijwayele ukugqoka iziqongo zezitshalo ngoba angibonisi isikhumba sami esingaka, op. Lokho kwangibeka buqamama, kwavele kwangenza ngabukeka ngikhulu kancane. - Usefikile! - Noma ngikhona kulokho Ingubo abangikhethele yona ibingazizwa njengami, inginike imibono emihle impela yokuthi ungazihlanganisa kanjani zonke lezi zinto.
Impela ngifuna ukudlala ngesikhumba ngaphezulu. - Ngicabanga ukuthi ngigqoka kakhulu ngomcibisheli wami kanye newele lami, ngakho-ke benginethemba lokubona izinqama eziningi kakhulu. Bekungazizwa sengathi ngingumphathi, ngithatha isikhala, nginesibindi - Ukubukeka kokugcina engikuthole kahle kakhulu bekutholakala ngosayizi wami, bekucasula kancane ngoba bengifuna leso sitayela somgwaqo esihle umzuzwana manje ngicabanga ukuthi kunzima ngempela kuLunden noSam ukuthola lezi zingcezu uma abaklami bengazenzi.
Ngiwuthande kakhulu umphumela wokugcina. Ngifisa sengathi ngabe bekuyisitayela somgwaqo esithe xaxa - noma ngabe awukholelwa ngempela ekufundweni kwezinkanyezi, kunezici ebuntwini bonke oziqhenya ngabo futhi kwesinye isikhathi ofuna ukuzigqamisa ngemfashini - uyazigqokisa ukukhumbula ukuthi umuhle kanjani ngakho-ke kungani ungahambisani nokufundwa kwezinkanyezi - ngakuthola kuthakazelisa ukuthi mina noChristina noKuwilileni sonke sasinokuvuka okufanayo nezimo zengqondo kanye nazo zonke izinto ezihlukile zezinkanyezi engingazi lutho ngazo. - Gemini, Gemini.
IVenus neTaurus lapho neTaurus inyukela lapha.- Ngabe sesingabangane abakhulu nje? (ehleka) - Ngiyayithanda. Sifana-- Singobuciko! (wonke umuntu uyahleka) - Ngenkathi ngingena kuleli gumbi bengingalindele ukusondela, kepha sengivele ngathi ngami ngazi okuningi kakhulu ngawe nokuthi uhamba kanjani emhlabeni - Imicu eminingi kangaka exhumanayo - -- Ngiyazi.
Ngabe iMars eseCapricorn yinhle?
IMars eCapricornizidingokuhleizintaba ukukhuphuka empilweni. Uyaphila lapho kunokuphikiswa, futhi ubonise amandla amakhulu ekuphishekeleni izinhloso zakho. Uyazilawula futhi awuthathi ama-oda kahle kwabanye.Mashiungumpetha weLanga, naku-ICapricorn, unentando eqinile yokuya kude.13. 2019.
Ingabe iVenus neMars ziyahambisana?
MashifuthiI-Venusngokwabo ngeke kuqinisekise ubudlelwano obuhlala njalo noma ngisho nokuqinisekisa ukuthi ubudlelwane buzoqala. Yize uhlangothi olubonakalayo lobudlelwano lungaphumelela, kungahle kungaqinisekisi ukuxhumana kwesikhathi eside.
Ngenxa yokushisa okushisa kanye nomoya ominyanisa, waziwa njengewele elibi loMhlaba kepha ngabe uVenus wayehlale enobutha? Lokhu kwembuliwe, futhi namuhla siphendula umbuzo ongajwayelekile; Ngabe abantu baphila ngaphambi koMhlaba kuVenus? Ingabe ungumthandi wamaqiniso? Ingabe uhlala ufuna ukwazi? Bese ubhalisele ku-Kuvuliwe ukuze uthole iziqeshana eziningi njengale? Futhi khalisa insimbi ngokuqukethwe okuthakazelisa kakhudlwana! NgoSepthemba 2020 kwabekwa itshe lesisekelo lokucwaninga ngeVenus, okuholwa ososayensi abavela eCardiff University e-UK, bathola ukuthi emafwini aseVenus, phezulu ngaphezu komhlaba uqobo lwawo, kunemikhondo ye-phosphine - i-molecule eyakhiwe ngengxenye eyodwa ye-phosphorus nezingxenye ezintathu Emuva lapha emhlabeni, i-phosphine iwuphawu lokuphila oluvame ukutholakala ezindaweni ze-anaerobic (noma i-deoxygenated).
Lokhu kutholakala kwaqubula impikiswano entsha mayelana nokuthi ngabe kukhona yini ukuphila kwasemkhathini kwenye indawo kuhlelo lwonozungezilanga nokuthi ngabe iVenus - umakhelwane onesihogo somhlaba, ongayekethisi ovame ukunganakwa uma kukhulunywa ngamakhaya angaphandle angahle abe yindawo okufanele uhambe kuyo Okubalulekile, iqembu elingemuva ukutholakala kwe-phosphine akuzange ngisho nokuthi umsebenzi wabo kufanele ube ubufakazi bokuthi impilo ikhona kuVenus.
Eqinisweni, bameme ngokusobala abanye ososayensi, izazi zezinkanyezi, nabaphenyi ukuthi beze nenye incazelo yalokhu. Futhi sibhekene nesiginesha encane kakhulu lapha enama-molecule we-phosphine cishe ayishumi kuya kwangamashumi amabili ngesigidigidi sezigidigidi futhi sithole nokuthi ikuphi (cishe ngamamayela angamashumi amathathu ngaphezulu kobuso beVenus) abahlaziyi emhlabeni wonke banwaya amakhanda abo ngokuthi kwenzeka kanjani lapho Umqondo wokuthi kungenzeka ukuthi impilo yayikhona kuVenus esikhathini esedlule kude akuyona into entsha ngokuphelele.
Ngenkathi iMars ivame ukweba izihloko eziningi uma kuziwa ekuhloleni kwamaplanethi, buthule siye safuna enye indlela ezungeze kubandakanya ukutadisha iVenus emashumini ambalwa eminyaka edlule, futhi imibono ngamaplanethi asondelene kakhulu eSanga ayaqoqeka Futhi manje iVenus ayinayo okuningi ongakunikela. Amazinga okushisa aphakeme angaphezu kuka-450 degrees Celsius, ingcindezi ecindezelayo, futhi ngenxa yokuthi umkhathi ungamaphesenti angama-96 esikhutha, kubhekwa njengenye yezindawo ezingathandeki kakhulu esake sazama ukusondela kuzo. Futhi sazama.
Ngawo-1970s nangama-80s, amaphenyo ahlukahlukene weSoviet Union azama ukwehla okuyingozi okuya eVenus ngamazinga ahlukene empumelelo.
Kepha nalawo afike ngaphezulu ahlala isikhashana ngaphambi kokubhujiswa - nesikhathi sokurekhoda emhlabathini esethwe ngo-1982 ngophenyo lweVenera 13, oluthathe imizuzu eyi-127 ngaphambi kokunqotshwa. I-NASA ifike naseVenus ngePioneer Project ngo-1978, kepha okuningi esikuzamile ngeplanethi kukhawulelwe kuma-orbiters naku-flyby. Isikhala saseSoviet siphenya iVenera 15 ne-16 ezungezwe maphakathi nawo-1980 futhi sanikeza imininingwane ebalulekile ekhombisa ukungabikho ngokuphelele kwama-plate tectonics emhlabeni.
Ngemuva kwalokho imishini yeNASA iMagellan (ekuqaleni kwawo-1990s) yabeka imephu uVenus ngokuningiliziwe, okusisiza ukuthi sinqume ukuthi indawo yayo yayincane, mhlawumbe iphakathi kwezigidi ezingama-500 no-800 wezigidi ubudala. Okwamanje sidale isithombe seVenus njengeplanethi efile kepha futhi njengendawo okungenzeka ukuthi yake yaphila kakhulu.
Eminyakeni embalwa edlule lesi sithombe sesichazwe kabanzi. IVenus Express ibiyisikhungo semikhumbi saseYurophu sale nhlangano, ebesisebenza iminyaka engaphezu kwengu-9 phakathi kuka-2005 ngasekuqaleni kuka-2015. Waphinda wahlola uVenus ekude, kodwa kulokhu kukhona okunye engqondweni, njengokushintsha kwesimo sezulu.
Lapho sibona ukuthi iVenus (njengoba sazi) yayiminyaniswe yi-carbon dioxide, ikhombisa umphumela wokubalekela ukushisa okushisayo, ukukhuphuka kwamazinga okushisa, kanye nezimo ezijwayele ukuhlalisa abantu ebusuku kunempikiswano yokuthi yilokhu uMhlaba ongaba yikho uma ukufudumala kwembulunga yonke kuqhubeka kunganqandwa lapha.
Umphumela osemqoka womsebenzi weVenus Express, nokho, kwaba wubufakazi obengeziwe bezilwandle ezedlule ezabikwa emhlabeni. Namuhla yindawo eshisiwe futhi enobuthi, kepha kudala kungenzeka ukuthi bekungeyona. Njengoba injabulo ikhula ngaseVenus, kunomsebenzi okhethekile ohamba uzungeza indiza.
Njengoba sikhuluma, iphenyo le-JAXA Akatsuki belilokhu lizungeza kusukela ngo-2015. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukubuka leli gumbi ukuze uthole izindaba ezengeziwe ezivela kulesi sifunda sesistimu elanga! Noma kunjalo, kuhlala kungukuqa okukhulu ukusola ukuthi impilo yanoma yiluphi uhlobo ingahle ibekhona (noma ibingaba khona kanye) eVenus ibanga ukuthi kungenzeka ukuthi abantu babehlala lapho ngaphambi kokuba bahlale lapha. Kodwa-ke isiphakamiso senziwe phambilini.
NgoSepthemba 2019, cishe cishe unyaka ngaphambi kokutholakala kwe-phosphine ngo-2020, ithimba le-NASA's Goddard Institute lashicilela imininingwane yocwaningo lapho ukulingisa okuyisihlanu kukhombisa khona ukuthi iVenus yayingashintsha kanjani ngamazinga ahlukene okumbozwa kwamanzi, kanti iVenus yake yenza ulwandle olusingathiwe. ucabange nje ukuthi lezi zilwandle zingaqhubeka zikhule.
Empilweni yangempela siyazi ukuthi abazange; Siyazi ukuthi kukhona okwenzeka cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-700 edlule okwadala lokho okwaziwa ngokuthi ukuphuma kwe-CO2, ngakho-ke umphumela ongalawuleki wokushisa okushisa esiwaziyo manje ususabalele. Kodwa-ke, uma sisusa lo mcimbi odlisayo, futhi yonke imidwebo emihlanu evela eGoddard Institute ikhombisile ukuthi uVenus uzokwazi, sikwazi ukugcina amazinga okushisa aphephile, afanele impilo yonke. Akekho onesiqiniseko sokuthi yini evimbe iVenus nge-CO2, kepha ukube bekungenjalo, bekungafana nezwe lamawele loMhlaba - indawo ewuthanda kakhulu, enamazinga okushisa aphakeme nje (ngenxa yokusondela kakhulu kwe ilanga).
Lapho ososayensi nezazi zezinkanyezi behlaziya izinhlelo zezinkanyezi ezikude kakhulu namuhla, bavame ukukhuluma ngendawo yeVenus, ibhande elincane elizungeze inkanyezi lapho amaplanethi angaphakathi kuthathwa njengangakulungele ukuphila. Kepha uma iVenus ingenakuthokozeka ngenxa yesigameko esisodwa esingahleliwe - ukukhipha amandla okungekho muntu onesiqiniseko sangempela ngakho, mhlawumbe akufanele sibhale iVenusZone ngokushesha ezintweni lapho sifuna impilo yasemhlabeni. Okucatshangwayo okubalulekile lapho kuhlaziywa umhlaba ongaziwa ukuthi kungawasekela yini amanzi angamanzi? Futhi ngokusho kweGoddard Institute, ukube umlando bewuhlukile, khona-ke uVenus ubengathola ithuba.
Ngakho-ke yiziphi izingqinamba? leyo ndoda ngabe yavela lapho njengalapha? Ngakolunye uhlangothi, izinhlobo zabantu zingabonakala kalula njengomphumela wamakhemikhali afanele nezimo nezinto ezikhona ngesikhathi esifanele. Umuntu wanamuhla ubekhona kuphela emhlabeni iminyaka engama-300,000 noma ngaphezulu yize okhokho bethu bokuziphendukela kwemvelo bebesekhona isikhathi eside kakhulu. Akunandaba, noma yiminyaka engama-300,000 iyisilayidi nje ohlelweni olukhulu lwendawo yonke futhi imelela iphesenti elincane kakhulu lesikhathi uVenus abekhona (cishe iminyaka eyizigidigidi ezi-4.5).
Lapho-ke uma kukhona impikiswano yokuthi izimo eziseVenus manje yilokho uMhlaba ozobhekana nazo endleleni, khona-ke kungabuye kube nempikiswano yokuthi uVenus kungenzeka ngaphambili wabamba izimo ezifanayo ze-e (noma ezifanayo kakhulu) njenganamuhla emhlabeni. Kulokhu, kusho ukuthini ukuthi nabantu abakakhuli? Yebo, kunempikiswano eyodwa eyinhloko ephikisana nayo; kuyamangalisa kakhulu, akunakwenzeka ngendlela emangalisayo. Intuthuko, kufaka phakathi ukutholakala kwe-phosphine ka-2020, iyaqhubeka nokukhombisa ukuthi amathemba okuphila kwenye indawo ngokuvamile aphezulu, ngokuvumelana okuningi kwesayensi ukuthi kukhona impilo engaphandle komhlaba - asikakatholi okwamanje.
IVenus yayingakaze ibe sembili ekufuneni kwethu impilo ngoba inenzondo enkulu, kepha ingabe lowo mbono ushintsha kancane kancane abantu? Cishe cha. Noma ngabe izimo zeVenusian bezikade zisondele kakhulu kuMhlaba, umugqa wesikhathi weplanethi yonke ubuzolingisa umhlaba ngokuphelele ngendlela ebengeke ube nayo, ngoba konke lokhu kufanele ukuthi kwenzeka okungenani eminyakeni eyizigidi ezingamakhulu ambalwa edlule, esikhathini esithile ngaphambi kweCarbon dioxide edala ukunqoba lokho konakalisa iplanethi.
Njengoba nje imibono eminingi iphakamisa ukuthi impilo engaphandle komhlaba ayikho ndawo lapho ingahle ibukeke njengomuntu (despi lokho okushiwo ama-movie) uma impilo yasemhlabeni itholakale kuVenus (noma yayikhona emlandweni weVenus), kunzima impela ukusho ukuthi kungaba kanjani. Amathuba okuhamba, ukukhuluma nokukhulisa abantu abaziwayo aqhubeka nokuthuthuka - ngakho-ke iplanethi esiseduze neyethu (yamabhiliyoni wamanye amaplanethi laphaya) aphansi ngokuxakile - noma kungatholakali ama-molecule e-phosphine emafwini aseVenus namuhla. Ucabangani? Ngabe kukhona esikuphuthele? Ake siphawule ngakho, hlola lezi ezinye iziqeshana kusuka kwavezwa futhi uqiniseke ukuthi ubhalisela okuqukethwe kwethu kwakamuva bese ushaya insimbi.
Ngabe iCapricorn Mars ilungile embhedeni?
TOMashiphakathiICapricornkuvame ukukwazisa ukuphepha, ukungaguquguquki, nokuhlakanipha okuvela kubalingani babo bezocansi. Bakhangwa kakhulu umuntu onolwazi oluningi, umuntu abangafunda kuye. Lokhu kwenza ukutshelwa ukuthi wenzeni futhi ubusweumbhedeukuvula okunolaka.2. 2018.
Yini i-Mars eSagittarius ehehwa?
Abantu abaneIMars kuSagittariusezocansiukhangwalabo abanoVenus phakathiI-Sagittarius, Ama-Aries, uLeo noGemini.
Ngubani ohambisana noVenus eSagittarius?
Okuhamba phambiliFanisa:I-Venus ku-SagittariusnabalinganiI-VenuskuLibra noma ku-Aquarius. ILibra ne-Aquarius yizimpawu zomoya eziseduze nesibonakaliso somliloI-Sagittarius. Izakhi ezine umlilo, umhlaba, umoya namanzi ngokuvamile kwehla kube ngamaqembu amabili amabili: umlilo nomoya, nomhlaba namanzi.
Yini ehehwa yiVenus kuCancer?
IVenus kuCancer wesilisa ukhetha aowesifazane othanda imizwa nomndeni. Indoda eneVenus kuCancer ifuna owesifazane ozoxabana naye futhi akwazi ukuthinta izidingo zakhe. Owesifazane ongumama futhi ondlayo ukhanga kakhulu kuVenus kuCancer wesilisa.17. 2017.
Ingabe i-Sagittarius Mars ilungile embhedeni?
Itshe eliyinhloko le-MashiphakathiI-Sagittariusubulili abumsulwa. Kukhona ikhwalithi efana nengane endleleni yabo yokuhlukanisa inhlanganisela ebukekayo yokulangazelela okuxakile nokumangala okubanzi. Okuningi kwalokhu kuvela ethembeni labaAbathandiinokunikezwa okungenamkhawulo.30. 2010.
Ingabe iMars eSagittarius ilungile embhedeni?
TOIMars kuSagittariusinendlela eqondile nokho ehlekisayo futhi engenacala kwezocansi. IlungileMashiukuhambisana kwezimpawu: Umlingani ocansini nowaboMashiNgena ngemvumeI-Sagittarius, Ama-Aries, uLeo, noma iGemini bazokwazisa isitayela sabo sothando lokuzijabulisa kuumbhede.2. 2018.
Ingabe iMars eSagittarius iqotho?
Ebudlelwaneni, uzinikele kakhulu futhiqotho, kodwa futhi uyaqaphela ukuthi inkululeko empeleni ibaluleke kakhulu, kuzo zombili izimo. Ufuna ukuhlonipha izinqumo nezifiso zakhe, kepha ulindele okufanayo.amashumi amabili nanye . 2019.